CDF Hakha Nih Ralhrangbu Minung Kul An That Ning Hna Update – Thechinlandtoday
CDF Hakha Nih Ralhrangbu Minung Kul An That Ning Hna Update
admin June 30, 2021 LeaveaComment on CDF Hakha Nih Ralhrangbu Minung Kul An That Ning Hna Update
CDF-Hakha nih Bungzung SAC ralkap le Palek 20 tluk an kahthah hna. Chinland Defense Force-Hakha ခုခံကာကွယ်မှု သတင်း ဇွန်လ ၂၉၊ ၂၀၂၁ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်း ၅:၄၀ မှ ၁၁ နာရီ အထိ ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးမြို့နယ် Bungzung ရဲစခန်းတွင် အကြမ်းဖက် ရဲတပ်သား၊
စစ်သားများနှင့် CDF-Hakha များအကြား ပစ်ခေတ်မှု ရှိခဲ့ပြီး ရန်သူဘက်မှ ၂၀ ခန့် သေဆုံးခဲ့သည်။ CDF ဘက်မှ အကျဆုံး မရှိဘဲ မစိုးရိမ်ရ​သော အ​သေးစားဒဏ်ရာ တစ်ယောက်ရှိသည်။
June 29, zinglei suimilaam 5:40 in 11:00 tiang Hakha peng, Bungzung Palek Sakhan ah CDF – Hakha le SAC palek, ralkap an i kap. Ralhraang lei in 20 hrawng an thi.CDF lei inathi mi an um lo, thinphangasi lo mi hmapu pakhataum tiah CDF nihathanh.Chinland Defense Force-Hakha ခုခံကာကွယ်မှု သတင်း
ဇွန်လ ၂၉၊ ၂၀၂၁ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်း ၅:၄၀ မှ ၁၁ နာရီ အထိ ချင် းပြည်နယ်၊ ဟားခါးမြို့နယ် Bungzung ရဲစခန်းတွင် အကြမ်းဖက် ရဲတပ်သား၊ စစ်သားများနှင့် CDF-Hakha များအကြား ပစ်ခေတ်မှု ရှိခဲ့ပြီး ရန်သူဘက်မှ ၂၀ ခန့် သေဆုံးခဲ့သည်။ CDF ဘက်မှ အကျဆုံး မရှိဘဲ မစိုးရိမ်ရ​သော အ​သေးစားဒဏ်ရာ တစ်ယောက်ရှိသည်။
Credit: Chinland Defense Force
Delhi Le Malaysia Laimi Hna Cancer Le Hepatitis Zawtnak Ngei Nih Bawmhnak Hal Khawh Si →
← Tuchun Cu Hakha Thongtla Minung Sawmli Renglo Ruahlo Ah An Thlah Hna